कैलालीमा निर्वाचनको तयारी सुरु - Dhangadhi Khabar
सोमबार २४, फागुन २०७७ २२:००
कैलालीमा निर्वाचनको तयारी सुरु
धनगढी । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कैलालीले तयारी थालेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ०७८ वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि कार्यालयले मतदानस्थल थप्ने, केन्द्र हेरफेर गर्ने र त्रुटि सच्याउने काम सुरु गरेको हो ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले चार स्थानमा मतदानस्थल थप्नुपर्ने देखिएको बताए । ‘जिल्लाभर २३१ मतदानस्थल र ५३४ मतदान केन्द्र रहेका छन्,’ निर्वाचन अधिकारी भट्टले भने, ‘कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा मतदानस्थल टाढा भएकाले चार मतदानस्थल थप्ने तयारी भईरहेको छ । त्यस्का लागि हामी फिल्डमा पनि पुगिसकेका छौ ।’
भट्टका अनुसार निर्वाचन आयोगको निर्देशन अनुसार मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्ने तयारी पनि भईरहेको छ । त्यस्का लागि स्थानीय तहको केन्द्रमा रहेका वडा सचिवलाई सहायक नाम दर्ता अधिकारी तोकिएको भट्टले बताए ।
‘माघ १५ गतेदेखि मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि १ गतेसम्म त्रुटी सच्याउने र हटाउने काम गरिने छ ।’ मतदाता शिक्षा तथा स्थल र केन्द्रका विषयमा राजनीतिक दल र स्थानीय तहसँग छलफलसमेत भइरहेको उनले बताए ।
बिहिबार ०८, माघ २०७७ ०३:०० मा प्रकाशित
धनगढी उप–महानगरपालिकाद्धारा ५५ बर्ष माथिकालाई खोप लगाउन सुरु
गोदावरी पत्रकार मञ्चद्वारा महिला तथा बालबालिका सेभ हाउसलाई खाद्यान्न सहयोग
रेडक्रस सोसाइटी धनगढीले ५० औं स्वर्ण जयन्ती मनाउने
लिटल फ्लावर प्रिमियर लिग : साउदको सतकमा शारदाको सानदार जित
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा ८९ जनामा कोरोना पुष्टि, १ जनाको मृत्यु
महिला दिवसमा श्रीमान बोकेर दौडने प्रतियोगिता
पलभरमै खरानीभयो भोजराजको सुदूरको सेवागर्ने सपना !
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा आजदेखि सहज आवागमन
दर्दनाक दृश्यः उद्धघाटन हुन नपाउँदै खरानी भयो धनगढीको आलोक मल्टी कन्सर्न प्रा.लि.
बैतडीमा ३ महिने छोराको टाउकोमा हानेर बुवाले गरे हत्या
महेन्द्रनगरमा प्रहरी जवानको परिक्षा दिने २२ जना नक्कली परिक्षार्थी पक्राउ
धनगढीको फर्निचर उद्योगमा आगलागी, आगो नियन्त्रण बाहिर